Heerka gaaska CO2 ayaa gaaray meel cusub ee isbeddelka cimilada adduunka - BBC News Somali
Heerka gaaska CO2 ayaa gaaray meel cusub ee isbeddelka cimilada adduunka
Lahaanshaha sawirka NASA
Image caption Sawir heerka gaaska CO2 ee hawada ku jira ee adduunka oo intiisa badan ay soo daayaan Maraykanka, Shiinaha iyo Yurub
Heerka CO2 ee gaaska hawada ayaa dhaafay heer muhiim ah waxaana laga yaabaa inuu hoos u dhici waayo sanado badan.
Heerka 400 ppm ayaa la dhaafay caalamka markii ugu horaysay taariikhda sanadka 2015-ka.
Laakiin sida ay sheegtay hayadda caalamiga ee cimilada ee World Meteorological Organisation (WMO), 2016 ayaa noqon doona sanadkii ugu horeeyay ee dhamaantiis la dhaafo heerka 400 ppm.
Heerkan aad u sareeya ayaa qayb ahaan waxaa sababay cimilada nooca El Nino ee dhacday.
Halka CO2 ka imaanaya bini'aadanka uu iskumid ahaa inta u dhaxaysay 2014 iyo 2015, cimilada El Niño ayaa sababtay inuu kordho heerka gaaska ee hawada ku jira.
Taasi waxaa sabab u ah xaalada abaarta ee gobolada kulaylka ee ay keentay cimilada nooca El Nino, taasoo macnaheedu yahay in cagaarka uu soo jiidan waayo gaaska CO2. Waxaa kaloo jiray gaas ka imaaday dab uu keenay xaalada roob la'aanta.
Warbixintooda sanadlaha ee gaaska ayaa ururka WMO sheegay, in xaalada jirta ay caawisay kororka CO2 ee hawada oo ka saraysa halkii uu joogay tobankii sano ee ugu danbaysay.
Saldhigooda baaritaanka ee ku yaal Mauna Loa ee Hawaii, heerka CO2 ayaa dhaafay 400 (ppm), taasoo micnaheedu yahay 400 molekules oo CO2 ayaa ku jira halkii milyan ee molekules ee hawada.
Markii ugu danbaysay ee CO2 uu si joogta ah u dhaafo 400ppm waxay ahayd saddex ilaa shan milyan oo sano ka hor, ayay sheegeen qabiirada.
Ilaa sanadkii 1800 heerka CO2 ee hawada waxay ahayd ilaa 280ppm, sida ay sheegtay hayadda Maraykanka ee qaabilsan badda iyo hawada ee National Oceanic And Atmospheric Administration (Noaa).
Warbixinta WMO ayaa sheegtay in kororka CO2 uu dhaafay heerka 400ppm ay marar badan dhacday, waxayna u badan tahay in 2016 uu noqon doono sanadkii ugu horeeyay oo dhamaantiis cabirka CO2 uu ka sareeyo heerka 400ppm, sidaas darteedna uu jiri doono sanooyin badan.
Halka waxyaabaha ay sababto El Niño ay hadda dhamaadeen, saamaynta bini'aadanka uu ku leeyahay isbadalka cimilada ayaan dhamaan, ayay ku doodaysaa warbixinta WMO.
Lahaanshaha sawirka NOAA
Image caption Saldhiga hawada lagu baaro ee ku yaala Mauna Loa Hawaii ee Maraykanka ayaa helay in heerka CO2 uu gaaray 400ppm
Halka WMO ay soo dhawaynayso dadaalada cusub sida heshiiska caalamiga ee lagu joojinayo gaaska HFC oo dhawaan lagu gaaray dalka Rwanda, WMO ayaa ku doodaysa in waddamada ay xooga saaraan inay yareeyaan CO2.
"Hadii aan wax laga qaban gaaska CO2 ee hawadda galaya, waxba kama qaban karno isbadalka cimilada iyo in kulaylka cimilada ay ka hoosayso 2 degree (Centigrade)" ayuu sheegay xoghayaha guud ee ururka WMO, Petteri Taalas.
Ilaa 200 oo waddan oo saxiixay heshiiska Paris ee cimilada ayaa ku kulmi doona Morocco bisha November ee soo socota, si go'aan looga gaaro tallaabooyinka la qaadayo si loo meel mariyo heshiiska.